समाजवादीको बैठक जारी: बजेट अधिवेशनपछि मात्र मन्त्री फेर्ने देउवाको मुड ! - Kantipath
समाजवादीको बैठक जारी: बजेट अधिवेशनपछि मात्र मन्त्री फेर्ने देउवाको मुड !
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बैठक बसिरहेको हो ।
स्थानीय चुनावको समीक्षा, आन्तरिक गतिविधि, सत्ता गठबन्धन, राष्ट्रिय राजनीति लगायत बैठकमा एजेण्डा छ । बैठक बुधबार पनि बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा बैठक समापन भएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न निरन्तर दबाब दिए पनि बजेट अधिवेशन समापन भएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने भएका हुन्।